Kedu ihe kpatara ịhọrọ profaịlụ aluminom ụlọ ọrụ maka fences omenala?
Na mmepe nke Times, ọtụtụ ndị na-emepụta ngwa ọrụ mmepụta ihe na-achọ ijikwa ngwá ọrụ ha na ígwè ọrụ mgbatị na nsu, na-akpọ iche iche iji chebe ọrụ nkịtị na nchekwa nke ndị ọrụ. Kedu maka ụlọ ọrụ alumini maka ụlọ ọrụ omenala? Ọ ga-adị mma! Na ...
Gini mere profaịlụ aluminom ji nwuo - imeghe omenala karia?
Industrial aluminom profaịlụ bụ ụdị aluminom alloy extrusion mepụtara site na ulo oru ubi ji profaịlụ ngwaahịa. Nkọwa nke aluminom nwụrụ na-egosi na mgbakwunye na ndị ahụ 20,30,40,50,60,80,90,100,120 na usoro ndị ọzọ nke aluminom, profaịlụ alloy nwere ike ịnwe ...
Omenala aluminom mere nke kwesiri ime ihe ojoo
1. Ọ ga-n'ezie na-ahaziri? Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi profaịlụ aluminom maka mpempe mpụga nke akụrụngwa ahụ, a na-atụ aro ka ị ghara ịhazi, n'ihi na profaịlụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke aluminom bụ profaịlụ aluminom dị elu, na enwere ọtụtụ nkọwa, ca ...